काठमाडौँ ओपन गल्फको उपाधि थापालाई | Hamro Khelkud
काठमाडौँ ओपन गल्फको उपाधि थापालाई
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – सुर्य नेपाल गल्फ टुर २०१६/१७ अन्तर्गत पाँचौ इभेन्टको उपाधि रामे थापाले जितेका छन्। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा खेलिएको अन्तिम दिनको खेलमा इभन पर ६८ स्कोर बनाउदै समग्रमा ५ अन्डर २६७ अंक जोड्दै थापाले उपाधि जितेका हुन्।
अन्तिम चरणको खेल सुरुहुनुअघि ६ स्ट्रोकको अग्रता बनाएका थापा एक समय ९ स्ट्रोकले अगाडी थिए तर १४औं र १५औं होलमा खराब प्रदर्शन गरेपनि उनि शीर्षस्थानमा रहिरहे। जितसंगै उनले ट्रफी र रु. ८५ हजारको चेक प्राप्त गरे। दोश्रो स्थानमा रहेक शिवराम श्रेष्ठले शुक्रबार इभन पार ६८ खेल्दै समग्रमा १ ओभर २७३ जोडे। उनले रु. ५८ हजारको चेक प्राप्त गरे भने उनीभन्दा २ स्ट्रोक बढी खेलेका भुवन नगरकोटीले तेश्रो हुँदै ४५ हजार पाए।
सुर्य प्रसाद शर्मा र धन बहादुर थापाले चौथो स्थानमा रहदैं रु. ३७,५०० जित्दा छैठौं स्थानमा रहेका संजय लामाले रु. ३०,००० पाए। सातौं स्थानमा रहेका विकास अधिकारी र रबि खड्काले रु. २३,७५० जिते भने नवौं स्थानका भुवन कुमार रोक्काले रु.२०,००० पाए। १०औं स्थानमा रहेका कृष्ण मन राजवाहक र यलम्बर सिंह अधिकारीले समान रु.१७,००० जिते।